युरोपेली शिष्टाचार : प्रेरक प्रसङ्ग « Khabarhub
युरोपेली शिष्टाचार : प्रेरक प्रसङ्ग
यो घटना त्यो बेलाको हो जब ईश्वरचन्द्र विद्यासागर संस्कृत कलेजका आचार्य थिए । एक पटक उनले कुनै कामले प्रेसीडेन्सी कलेजका अङ्ग्रेज आचार्य केरसँग भेट गर्न जानुपर्‍यो । केर त्यो बेलामा जुत्ता लगाएर मेजमा खुट्टा फैलाएर बसेका थिए । उभिएर स्वागत गर्नु त टाढाको कुरा उनले ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई देखेर पनि त्यसैगरी बसिरहे ।
यो कुरा ईश्वरचन्द्रलाई राम्रो लागेन तर पनि उनले चुपचाप अपमान सहे । केही दिनपछि कुनै कामले केर ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकोमा आए । उनलाई देखेर ईश्वरचन्द्रले चप्पल समेतको आफ्नो खुट्टा उठार मेजमा फैलाए र आराम कुर्सीमा बसिरहे । उनले केरलाई बस्न समेत भनेनन् ।
केरले उनको यो दुर्व्यवहारको गुनासो लिखित रूपमा शिक्षा परिषद्का सचिव डा. मुआटसँग गरे । डा. मुआट ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकोमा गए र कुराकानीमा केरको गुनासोको कुरा गरे ।
यसमा ईश्वरचन्द्र विद्यासागरले भने, हामी भारतीय मानिस अङ्ग्रेजबाट नै युरोपेली शिष्टाचार सिक्छौँ । जब म उहाँसँग भेट गर्नको लागि गएको थिएँ तब उहाँ यसैगरी बस्नुभएको थियो । यसले मैले बुझेँ युरोपेली शिष्टाचार यही हो । यसैले मैले यसको अनुसरण गरेँ । उहाँलाई रिस उठाउने मेरो कुनै सोचाइ थिएन ।
उनको यस्तो कुरा सुनेर डा. मुआट र केर दुवैले शर्मनाक हुनुपर्‍यो ।
साभार तः ‘प्रेरक प्रसङ्हरु’ पुस्तकबाट
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७८, शनिबार ७ : ०७ बजे